Tanjona Fanontàna 2018: Irianay ny Hikarakara Fampianarana Manoratra ho An’ny Vondrom-Piarahamonin’ny Faritra Miteny Espaniôla · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Avrily 2018 2:33 GMT
“Fa maninona aho no te-hanana tongotra kanefa aho manana elatra hanidinana?”. Ity sary ity, izay nozarain'i Joselin Ibarra tao amin'ny Flickr (CC BY-NC-ND 2.0), maneho ampahany amin'ny fampirantiana zavakanto natokana ho an'i Frida Kahlo ka nanasàna ireo mpitsidika mba hameno ireo teny izay voasoratra teo amin'ilay tabilao ary avy any amin'ny fehezanteny malaza sy ny asa soratr'i Frida ihany koa. Ity tambakevitra tsara tarehy ity no vokatra izay heveriko fa fiantombohan'ny maro hafa. Mihevitra aho fa maneho miaraka tsara ny fizotra sy ny fomba fisainantsika io. Misaotra indrindra tamin'ny sosokevitra ry Lauren!
Ny 2018, hanandrana fomba fiasa vaovao hanatanterahana ny asantsika ireo toniandahatsoratry ny efitrano famoaham-baovaon'ny Global Voices, ireo mpitarika sampana, ary ireo mpikambana fototra hafa: matetika mametraka tanjona amin'ny antsipiriany sy manara-maso ny fivoarantsika ao amin'ny bilaogin’ny vondrompiarahamonina. Anatin'ity lahatsoratra manaraka ity, nanolotra ny drafitr'asany ho an'ny ampahany voalohany amin'ny taona i Laura Vidal, tonian-dahatsoratr'i Amerika LAtina sy ny faritra miteny Espaniola.
Olana efa ela ny safotofoto momba ny hoe “tantaran'ny GV”. Ao anatin'ny vondrom-piarahamonin'ny faritra LAtino-Amerikàna sy miteny espaniola, misy fahazarana handika ny laharam-pahamehana sy fomba fanaon'ireo haino-vaky-jery mahazatra ao amin'ny faritra, fa tsy tarihan'ny iraka manokana sy ny fomban'ny GV .
Matetika izany no miteraka tantara izay mitaky hery be dia be, fanoratana sy adihevitra satria sarotra ny manao izay hampety azy ireny ho an'ny GV. Mety hahakivy ireo mpikambana, hamizana ireo mpanoratra, ary hiasa hanohitra ny tanjontsika ireo hery, fanoratana sy adihevitra ireo.
Misy ihany koa ny fanambin'ireo mpandray anjara izay mino fa lasa “sarotra be” ny manoratra ho an'ny GV na ihany koa hoe lahatsoratra lava ihany no ilain'ny GV, na tsy mahafantatra hoe inona ny lohahevitra tsara horakofana na hoe ahoana ny fomba fitantaràna ho an'ny mpihaino “manerantany”. Mety hitarika ireo mpandray anjara hiala amin'ny fanoratàna voalohany izany.
Amin'izao fotoana izao, manao fampiofanana samirery miaraka amin'ireo mpikambana aho mba hanazavana ny hoe tantaran'ny GV sy mba hanalàna ny hevitra hoe tsy maintsy sarotra ny manoratra ho an'ny GV. Tsy izany anefa no tena tokony handaniana fotoana.
Nanomana “fihaonana an-tampony kely” izahay taona vitsy lasa izay, nandalinana tanaty Google Hangout samihafa ireo lohahevitra ireo ho an'ny fiarahamonina any amin'ny faritra, vitsy anefa ny tahan'ny fandraisana anjara, ary nahaliana ny vokatry ny fifampiresahana, lava loatra anefa raha atao ho jerena ho toy ny lahatsary Youtube tsotra.
Fomba iray hanazavana ny asan'ny GV ary hamerenana izany any amin'ireo mpanoratra.
Noho izany, ho an'ny telo volana manaraka, hifantoka amin'ny famoronana fitaovana sy fampiofanana aho izay hanazava amin'ny vondrona misy ahy sy ireo mpanoratra vaovao ny atao hoe tantaran'ny GV ary fomba hanoratana iray amin'izany.
Maro amin'ireo mpanoratra no liana amin'ny fampivoarana ny fahaizany manoratra, ary mientanentana tokoa ny sasany amin'ireo — indrindra fa ireo vao haingana — saingy miady amin'ny hevitry ny tantaran'ny GV na ny iraka ho an'ny asa fanoratanay anefa.
Hanao ny fampiofanana sasany miaraka amin'ny Kultural aho, famoahambaovao iray mahaleotena ao Paragoay ary mpiara-miasa amin'ny GV eo amin'ny famoahana. Nangataka fanampiana avy amin'ny Kultural aho satria mifandray mifandray betsaka amin'ny antsika ny soatoaviny, ireo tantarany sy ny fomba fisehony. Mandritra izany fotoana izany, manao tsara ho an'ireo mpamaky anay sy ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamoninay ny Kultural.
Teraka avy tamin'ny fampianarana nomen'ny vondrona mpanoratra sy mpnome endrika ny Kultural, izay lasa fitaovana fampianarana nanazava ny fomba “fanaovana ireo tantara eo an-toerana mba hanerana ny tany”. Te-hanorina fitaovana manakaiky ireo nampiarahan'ny Kultural aho, miaraka amin'ireo ohatra sy torolalana mazava izay atolotra amin'ny fomba tena mahasarika ny maso.
Na izany aza, manana antso maro iarahana amin'ireo mpanoratra aho mba handraisako an-tsoratra ireo sosokeviny momba ireo fampianarana mba hampifanarahana tsara azy ireny amin'ny filànay.
Fotoana kely ho an'ny dingana famoahana lahatsoratra, tantara sy fandraisana anjara tsara kalitao kokoa.
Noho ireo ezaka rehetra ireo, antenaiko ny ho afaka hanome tamberina ho an'ireo mpanoratra amin'ny fomba hita maso kokoa sy azo tsapain-tanàna, ary amin'ny fanaovana izany dia hamporisika ny fandraisana anjara tsara kokoa avy amin'ireo mpikambana. Antenaiko ihany koa fa io tanjona io dia hiteraka:
fotoana kely kokoa lany amin'ny dingana famoahana lahatsoratra;
tantara mismisy kokoa amin'ny kalitao tsaratsara kokoa izay manohana mazava tsara ny iraka tontosain'ny GV, soratana ho an'ny mpamaky “manerantany”;
fampiofanana ho an'ireo mpanoratra izay ahitana atrikasa sy tahirin-kevitra:
andiana fampianarana fohy 5 ao amin'ny Google Hangouts
andiana blaogim-piarahamonina izay manambàra ary avy eo mamintina ireo atrikasa;
andiana fanehoankevitra miaraka amin'ny lahatsary na feo avy amin'ny mpanoratra momba ny fomba fijeriny sy ireo ohatra amin'ny fanoratana ho an'ny GV;
antontan-taratasy iray izay manambatra ireo tsipika manan-danja izay nifanankalozana hevitra sy novolavolaina tao amin'ireo atrikasa.
Ho ampiasaina amin'ny fikarakarana ireo fampianarana sy ny fanomezana sosokevitra ny volana Febroary 2018, miaraka amin'ny hevitra hanombohana ny fampianarana amin'ny volana Martsa 2018.